Dabdhigayaasha iyo Abxadaha u Adeega Jwxo-shill – Rasaasa News
Dabdhigayaasha iyo Abxadaha u Adeega Jwxo-shill
Jwxo-shiil iyo xin u jilaniyo jaahiliintii halgan Jabiyoo jid u bixi waa, Jaaliyaadkoow waad u jeedaan jwxo say tahay, is jirjirintii sharci Jabintii Jaalow socon waa, Jidkaan falanee xabashi ku jabay kii jacdadiyee jugta nagu riday aynu jabinee Jwxo-shiil dila.
Kolka aad nin rageed waydo, nin la mood baa la arkaa. Halganka Somalida Ogadeeniya waxaa xarun u ahayd xarunta dalka Ingriiska ee London, dalalka kalena way ku faaftay, xili waxaa jir jirtay ay Jwxo ahayd labo ruux oo dadka badankiisu ay ka soo horjeedeen, laakiin labada ruux ayaa tayo lahaa waayo waxaa ay ahaayeen rag aqoon leh oo ka ugu yari haysto Shahaadada 2aad ee Jaamadcada.
Ma ahayn aqoon kaliya ee waxaa ay hayeen moraal xoog leh iyo mabddi xoog leh oo ay dad yari wax ku keeni kareen, runtiina way ka niib keeneen oo waxay abuureen nidaam xoog leh oo gaadhay gudo iyo dibadba. Kolka nidaam la abuuro waxaa loo bandhigaa daadka leh ama loo abuuray nidaamka in ay isticmaalaan, dadka nidaamka soo gala laba mid umbay noqdaan; dad si wanaagsan u isticmaal nidaamka la abuuray oo iyana ku sii sima dad kale oo halkaas ka sii wada guulina waxay u soo hiyataa umadaas nidaamka loo abuuray oo ka faa,iidaysata iyo dad u isticmaala nidaamka si xun burburiyana wax alaale wixii nidaam ahaa ee la abuuray, kuna dambaysiiya nidaamkaas dhibaato u soo hoyata ummadaas.
Jwxo-shiil, waxaa uu si khaldan u soo galay halganka ay waday Jwxo, wuxuuna ku dambeeyey in uu dhaxlo magaca Jwxo-shiil. Ninkan oo ka mid ah saraakiishii fara ku tiriska ahayd ee aadka ugu dhawayd M/weyne M.S.Bare, xidhiidhooduna uusan ahayn mid is la eg, laakiin isaga uun laga faa,iidaysan jiray, doqonimo daraadeed aadna uga tababar qaatay Siyad Bare oo aabe u ah silica sal dhigi la,a ee haysta dadka Jamhuuriyada Somaliya, ayaa Eebe weyne albaabka uga soo galiyey halganka ay waday Jwxo.
Jwxo-shiil, oo ah nin qaba dambiyo badan oo kala ah kuwo gaar iyo kuwo guud, ayaa waxaa uu u isticmaalay galida dambiyadaa dabdhigeyaal aan wax darajo ah ku lahayn dadweynaha Somalida Ogadeeniya. Waxaa kale oo uu u isticmaalay Abxado Eebe amarkii indhaha ka abaarsaday oo qaxootinimo ku jooga dalalka reer galbeedka [haween xadhig ka siidays ah, oo aan bulshada faa,iido u lahayn isku dir mooyee].
Dabdhigayaashu waxaa weeye rag da,a ah oo aan lahayn wax nolol raad magaalo ah, magaalnimadana meesha kaliya ee ay ka soo galaan waa cunida qaadka kaliya, haweenkii u dhaxay way kala tageen, gabdho yar yar oo reer miyi ahna waxay ku culaysiyeen Boosaaso, xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab iyo waliba xero qaxooti oo ku taal Eritariya. Ma jiraan wax shaqo ah oo ay ka hayaan dalalka reer galbeedka, noloshooduna waxaa ay ku xidhan tahay in ay kooxda Jwxo-shiil dad u soo uruuriyaan si ay been ugu qufaan iyana maalintaas ayey shaxaad helaan.
Abxadaha waxaa lagu gartaa, waa haween da,ah oo ayna jirin reer iyo raas ay ka fikiraan midna, mudo door ahna waxay ku noolaayeen dibadaha, ma aha dad haysta balwad ay naftooda ku madadaaliyaan [sida cabida badeecada], mana aha dad diimeed oo masaajidada ku jira si ay naftooda u mashquuliyaan. Erayga abaaxad waxaan ugu bixiyey way dadan yihiin, da,adoodana ma garan kartid in aad wajigood aragtid mooyee, waxay ku jiraan xiligii ay sodohayn jireen haweenku ee ay mashuul ku ahaan jireen caruurta ay gabdhahoodu dhalaan, laakiin dalalka reer galbeedka lagama yaqaano sodohaynta, sidaas ayeyna ku noqdeen meherad la,aan xaafadaha meermeeraystaan. Waxay ku qasban yihiin in ay istaagaan meeshii ay laba ruux isugu timaado, si ay u hadlaan ama ay hadal u dhagaystaan.
Jwxo-shiil, waa dadkaas dadka uu isticmaalay, kuwaas oo ay awoodu tahay in ay shilin soo baryaan iyo in ay shir yimaadaan kaliya. Waxaan aad u naxay kolkaan arkay video la yidhi waxaa laga duubay kooxda Jwxo-shiil, oo isugu jira qaambay ah dadka aan kor ku soo sheegay iyo kuwo yar yar oo uu u weyn yahay Lo,o afuuf tamuuje, Michle nin weyn [rabi], ina Cabdiqadir fanax iyaga oo ku banaanbaxaya Ina Iley oo aan u qalmin in lagu banaanbaxo.
Ceebeey talcaal Lo,o afuuf haduu London yimaadna wali waa Lo,o afuuf, BBC-da baa waraysatay taagmuuje, kolkaas ayuu lee yahay waxaanu rabnaa in la badalo Cabdi Iley iyo raga la midka ee dhibaatada ku haya dadkanaga. Dadka noocaas ah oo dabdhigeyaal u ah Jwxo-shiil, ayaa waxay dumiyeen halgankii ay waday Jwxo, ceebna waxaa ay u soo jiideen dadka reer Ogadeeniya.
Dadkaas oo sida na loo sheegay ah dadka ugu firfircoon ee Jwxo-shiil hor boodaya, waxaan la yaabay waxa ay ku biirinayaan halganka Somalida Ogadeeniya dadka noocaas ah, balse waxaa weeye dadka qoday qabriga Jwxo iyaga oo si indho la,aan ah ugu taageeray Jwxo-shiil burburinta halganka.
Cir Kaa Dheer Dhul Kaa Dheer waa Caadba Aduun
Ogeysiis: Kutub Cusub oo ka Hadlaya Taariikh Nololeedkii Dr Maxamed Siraad Doolaal